शालिकराम पुडाशैनीले बोलेको भिडियो शंकास्पद अवस्थाको सिर्जना – All top Here
Home/समाचार/शालिकराम पुडाशैनीले बोलेको भिडियो शंकास्पद अवस्थाको सिर्जना
काठमाडौ । आफ्नो आ*त्मह*त्या रवि लामिछानेका कारणले भएको भनेर शालिकराम पुडाशैनीले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेपाली सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । दिवंगत पुडाशैनी आफैँले बोलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पत्रकार लामिछानेका पक्ष र विपक्षमा च*र्का आवाज उठिरहेका छन् ।तर, उक्त सार्वजनिक भिडियो शं*कास्पद देखिएको सामाजिक सञ्जालका अधिकांश प्रयोगकर्ताको दा*बी छ । रेकर्ड गरिएको ८ मिनेट २७ सेकेण्डको भिडियोको ८ मिनेट १८ सेकेन्ड जाँदा त्यहाँ शं*कास्पद अवस्थाको सिर्जना हुन्छ ।
उक्त भिडियो हेर्दा लाग्छ पत्रकार पुडाशैनीलाई ज*बर्जस्ती बोल्न लगाइएको हो । ओछ्यान, सिरानीसँगै पुडाशैनीले लगाएको कपडा सबै सेतो कलरमा देखिरहेका बेला अ*चानक उनको सिरानीपट्टीको बायाँतिर हल्का निलो कलरको कपडा लगाएको अर्कै मान्छेको हातजस्तो देखा पर्छ । जसलाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले उनलाई कुनै समुहले क*ब्जामा लगेर ज*बर्जस्ती बोल्न लगाएको दा*बी गरिरहेका छन् । अर्को शं*का गर्ने ठाउँ कहाँ पनि छ भने भिडियोलाई ध्यान दिएर सुन्दा भिडियोको एक ठाउँमा पुडाशैनीले बोल्दै गर्दा ‘किन’ भन्ने आवाज सुनिन्छ । जसलाई सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले अर्को ‘शं*का’ भनेर कि*टान गरेका छन् ।
सामाजिक संजाल मा भेटिएका अन्य केहि संक उब्जिएका बिषयहरु :सालिकराम पुडासैनि काण्डमा अाशंका गर्नुपर्ने विषय हरु येस्तो देखियो !! १) सेल्फि भिडियो रुदै खिच्दै गर्दा एक्कासी सिरानिमा सेतो तकिया अाउँदा क्यामेरामा हलचल किन भयन ?२) ७ मिनेट २३ सेकेन्ड मा देब्रे साइड देखिएको हात कस्को होला ??३) ८.४७ सेकेण्डमा सालिकरामको भन्दा भिन्न अावाज ”किन”भन्ने कसको अायो ?४) अन्तिममा नमस्कार गरि दुवै हात जोड्दा सेल्फि कसरि भयो ? क्यामरा किन हल्लिएन ??५) भिडियोमा लगायको कपडा र झुण्डिएको अवस्थाको कपडा कसरि फरक भयो ?
६) केहि भिडियो अलि ईडिट गरेको जस्तो छ ,वास्तविक भिडियो कता छ ?७) भिडियो एक्कासी बिच बाट सुरु कसरी भयो ? ८) झुन्डिएको तस्बिर मा एउटा खुट्टा ले बिस्तरा मा टेकेको छ खुट्टा ले टेकि सके पछि प्राण जान्छ र ? ९) के झुन्डिनु भन्दा पहिले शालिकराम ले आफ्नै शरीर मा कुनै किसिम को प्रहार गरे त तेहा निला डाम र घाउ कहा बाट आयो ? 10) जहाँ बाट भिडियो सुरु हुन्छ त्यो भन्दा पहिले देखि नै रोइ रहेको देखिन्छ नत्र लाइब आउदा बित्तिकै तेसरी रुन सम्भव छ ??11) भिडियो सुरु हुनु भन्दा पहिले देखि नै कसै सित बोल्दै गरेको छ त्यसको अगाडी को भाग खै ??
१२) 7:52 कपि कस्ले पल्टायो १३) 8:46 किन कस्ले भन्यो १४) 2:32 सिरानी थिएन १५) 2:39 सिरानी कांहाबाट आयो। यो सबै बाच्न पाउछु भन्ने आश ले बोलेका हुन !! ह*त्याराले हरु ले यो यो भन भनेर लेखाएर घो*काएर सिकाएर बोलेको प्रष्ट शालिकराम का आँखा को त्रा*स ले देखाउछ !! सामाजिक संजाल प्रयोग कर्ता लेख्छन । शालिकरामले न्यूज २४ टेलिभिजन छो*डेर माउन्टेन टेलिभिजनमा गएसँगै फेसबुक लाइभमा पनि रविको गुनगान नै गाएका थिए र भनेका थिए अर्को सस्थामा रहेपनि रवि दाईसँग टाढा रहने छैन ।
साथै १६ गुलाई आर्थात् गुरु पूर्णिमाको दिन फेसबुकमा स्टाटस राख्दै दादा हजुरलाई सम्झिए भनेका थिए ।सामाजिक सञ्जालमा शालिकरामको म*र्नु अघिको भिडियो साथै उनले अन्य केहीसँग गरेको च्याटको स्क्रिनसटपनि बाहिरिएको छ । जहा उनले डि*प्रेसको औ*षधी खाएकोले पनि कतै यि विषय औ*षधीको कारण बोलेकी भन्नेहरुपनि छन् । यद्यपी डि*प्रेसनको औ*षधीले मानिसलाई कतिसम्म अ*सर गर्छ भन्ने विषयमा विशेषज्ञ डाक्टरको भनाइबाटमात्र प्रष्ट हुन्छ ।अर्कोतिर पत्रकार लामिछानेले घ*टना छा*नविनका लागि आफू पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसक्नुभएको छ ।
भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै पत्रकार लामिछानेले तत्काल प्र*तिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँको फेसबुक स्टासमा लेखिएको छ, ‘आ*रोप लगाउने मरेर गएपनि आ*रोप खेप्ने म जिउदै छु । म*र्नेले लगाएको एउटा मात्रै आरोप प्रमाणित होस् र हदै सम्मको स*जाय होस्। थप जानकारी केही समयमा गराउने छु। सारा आ*रोप सुन्दा लाग्यो शालिकराम लाई ठुलो भ्र*म परेछ।’ भिडियो सार्वजनिक भएसँगै हामीले नेपाल प्रहरीका केन्द्रिय प्रवक्ता डिआइजिपी विश्वराज पोखरेललाई सम्पर्क गर्दा घ*टना चितवनमा भएकोले अ*नुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा चितवन प्रहरीलाई भएको बताए । साथै आ*नुसन्धानमा रहेको विषयमा चर्चा प*रिचर्चाभन्दापनि प्रहरीको अ*नुसन्धानले सत्य बाहिर ल्याउने बताए ।
पहिरोले घर पुर्दा ६ को मृत्यु, ५ बेपत्ता
भिरबाट लडेर कक्षा १० मा अध्ययनरत सीताको मृत्यु
भर्खरै आयो अर्को दुखद खबर खबर